सुदूरपश्चिमको व्यापार घाटा भयावह : आयात साढे २३ अर्ब, निर्यात ९३ करोड - Birgunj Sanjalसुदूरपश्चिमको व्यापार घाटा भयावह : आयात साढे २३ अर्ब, निर्यात ९३ करोड - Birgunj Sanjalसुदूरपश्चिमको व्यापार घाटा भयावह : आयात साढे २३ अर्ब, निर्यात ९३ करोड - Birgunj Sanjal
सुदूरपश्चिमको व्यापार घाटा भयावह : आयात साढे २३ अर्ब, निर्यात ९३ करोड
१४ भाद्र २०७६, शनिबार ०३:३७
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका भारतसँग जोडिएका चारवटा नाकाको तथ्यांक हेर्दा व्यापार घाटाको अवस्था डरलाग्दो छ । कैलालीको त्रीनगर भन्सार, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सार, बैतडीको जुलाघाट भन्सार र दार्चुलाको भन्सार नाकाको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष आयातको चार प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ ।
‘कुनै दिन थिए, बर्दियादेखि वारी सत्तीघाट, भजनी, टीकापुर, हसुलीया र फुलबारीमा सरकारी धान खरिदका लागि काँटा लाग्थे, त्यहाँका गोदाममा किसानको धानगहँु किनेर पछि भारत पठाइन्थ्यो’, कृषि विकास बैंक धनगढी शाखाका प्रबन्धक जगदीश पन्तले भने, ‘अहिले, त्यो सबै घट्यो ।’
कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन मात्रै बढाउन सके व्यापार घाटा कम हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपालमा चुरेदेखि माथि हिमालको नजिकसम्म पहाडमा मकै, भटमास, कोदो, फाँपर, तरकारी, सबै फल्छ तर परम्परागत रूपमा फल्ने ती बालीको अहिलेको उत्पादन बर्सेनि घटिरहेको छ ।
‘त्यतिबेला कृषिमा अनुदान के हो ? भनेर किसानलाई थाहै थिएन र पनि मकै भारतबाट आएन, तराईको भटमाससँग तराईको चामल साटने चलन थियो, तराईको धान गहँुले पहाडलाई पुग्थ्यो, तर अहिले अनुदान पनि कैयौं गुणा बढेको छ, तर उत्पादन घटदो छ’, युवा व्यवसायी विवेक भट्टले भने ।
भट्टको प्यालेट दाना उद्योग छ । उनको दाना उद्योगमा विहारबाट मकै आयात भइरहेको छ । ‘कैलालीमा खाद्यान्न उद्योगपछि फस्टाएका प्यालेट दाना उद्योग हुन्, तर मकै भारतबाट निर्यात गर्नुपरेको छ । दाना उद्योगलाई आवश्यक मकैको ९० प्रतिशत भारतबाट आयात भइरहेको छ’, उद्योगी भट्टले भने । ‘कृषि उत्पादन बढाएमा, बजार पनि यतै छ, अनी व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ ।’
कैलाली भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ईश्वरीप्रसाद अर्याल पनि सुदूरपश्चिममा निर्यातजन्य बस्तु नभएकाले पनि व्यापार घाटा बढिरहेको बताउँछन् । ‘मेची क्षेत्रमा चियाको निर्यात हुन्छ, तर पश्चिममा पनि चियाखेतीको प्रचुर सम्भावना छ । मध्य नेपालमा अलैंची र कफी खेती हुन्छ । तर, त्यस्तै हावापानी भएको भूगोल सुदूरपश्चिममा पनि छ, उत्पादन शून्य छ । अनि व्यापार घाटा हुने नै भयो नि’, भन्सार प्रमुख अर्यालले भने ।
तराईको जिल्ला कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सारको निर्यात अवस्था दयनीय छ । एक अर्ब १५ करोडको आयातमा १० करोडको मात्रै निर्यात हुनु दुःखद् रहेको कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवराज विष्टले बताए ।
गड्डाचौकीबाट पिना (तोरी पेलेपछिको) अदुवा, घ्यू जडीबुटीमा तेजपात र रिठा तथा थोरै मात्रामा चित्रकला मूर्ति निर्यात हुने गरेको छ । केही समय अघिसम्म हस्तकला र नेपाली मौलिक मूर्तिका साथै लत्ताकपडा पनि भारत निर्यात हुने गरेको भए पनि अहिले घटेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । गड्डाचौकी नाकाबाट गत वर्ष स्याउमात्रै आठ करोड मूल्यको आयात भएको छ । कृषिजन्य पदार्थमा माछाका भुरा ६ करोड, आँप तीन करोड र केरा मात्रै तीन करोडको आयात भएको छ ।
निकासी शुल्क धेरै कम भए पनि यहाँबाट निर्यात घट्दै गएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भीमप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले, शारदा ब्यारेजमा १० टनभन्दा बढी सामान लग्न निषेध हुनु र बनवासा पुल कम समय खुला हुनुले पनि निर्यात घटेको दाबी गरे । बनवासा पुल दैनिक ४ पटक गरी २ घण्टाका लागि मात्रै खुल्ने गरेको छ ।
बैतडी जिल्लाको जुलाघाट नाकामा झोलुंगे पुल मात्रै छ । तर आजभन्दा चार÷पाँच दशकअघिको तुलनामा त्यो नाकाबाट कुनै पनि बस्तु निर्यात भएको छैन । ‘एकताका जुलाघाटामा घिउका टीन (डब्बा) राख्ने ठाउँ हुन्थेन । मोटरगाडी नचलेका बेला पनि मानिस भरिया लगाएर घ्यू जुलाघाट पुगाउँथे, तर अहिले एक किलो देख्न पाइन्नँ’ उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टले भने ।
एक दशक अघिसम्म पनि जुलाघाट नाकाबाट घ्यू र रिठाको निर्यात हुने गरेको उनले बताए । ‘साबुन फ्याक्ट्रीका लागि रिठा उत्तिकै निर्यात हुन्थ्यो, तर रिठाका रुख नै हराए । अहिले, नयाँ बिरुवा कसैले रोपेनन्, अनि व्यापार घाटा कसरी कम हुन्छ ? ’, उपाध्यक्ष भट्टले भने । २०७५÷७६ मा झुलाघाट नाकाबाट निर्यात शून्य रहेको भन्सार अधिकृत रामराजप्रसाद चौरसियाले बताए । उनले भने ‘पछिल्ला वर्ष यो नाकाबाट निर्यात शून्य छ ।’ जुलाघाट नाकाबाट कपडा, चप्पललगायत दैनिक उपभोग्य बस्तु बढी आयात हुने गरेको छ ।
भारतसँग मात्रै होइन चीनसँग पनि सीमाना जोडिएको र जडीबुटीसहितका बहुमूल्य बस्तुको निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने जिल्ला हो दार्चुला । तर, त्यहाँ पनि चीनसँगको व्यापार नभएको पाँच वर्ष भयो । भारतसँग ७१ लाखको आयातमा २२ लाख निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
दार्चुलाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्याउको प्रचुर सम्भावना छ । त्यहाँका बासिन्दाले बनाएका स्याउका बगैंचाको स्याउ बर्सेनि कुँहिएर जाने गरेको छ । ‘तिंकरसम्म सडक नबनेकाले त्यो स्याउ न स्वदेशको बजारमा पुगाउन सकिएको छ, न निर्यात’, दार्चुलाबाट प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु बोहराले भने ।
पाँच वर्षदेखि चीनसँगको व्यापार शून्य
नेपाली व्यापारीले ५ वर्षदेखि चिनियाँ सामान दार्चुला ल्याउन सकेको छैन । सडक नभएका कारण ताक्लाकोट दार्चुलाको व्यापार शून्यमा झरेको हो । विगत २५ वर्षदेखि ताक्लाकोटको गुत्गाउँमा व्यापार गर्दै आएका दार्चुलाका ठिम्पु महर भन्छन्, ‘पञ्चायतकालमा तत्कालीन पञ्चायत सदस्य बहादुरसिंह ऐतवालको पहलमा निर्माण भएको दार्चुला तिंकर घोरेटो बाटोको मर्मत र पुनर्निर्माण नहुँदा ताक्लाकोट दार्चुला व्यापार बन्द भएको हो ।’
ताक्लाकोटमा व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारी कल्यान धामीले सदरमुकमसम्मै सडक मार्गको पहुँच भएपछि व्यापारीले काठमाडौं, धनगढी बजारबाट चिनियाँ सामान मगाउने गरेको बताए ।
(धनगढीबाट शिवराज भट्ट, बैतडीबाट भगिरथ अवस्थी, कञ्चनपुरबाट महादेव अवस्थी र दार्चुलाबाट सुन्दरसिंह धामी)